Fikarohana momba ny firaisana Ny drafitry ny fanahy tamin'ny tantaram-piainana taloha nataon'i Angelina Lopes | Alfonso Lopes Reincarnation Case miaraka amin'ny Phobia & Fanovana Gender - Fikarohana Reincarnation
Angelina Lopes dia nodarohan'ny fiara taorian'ny andro iray tany amin'ny Beach
Angelina Lopes dia teraka tany Loures, Portugal tamin'ny Jolay 20, 1953. Ny reniny dia Irma Lopes, izay Katolika nafana fo. Nanana fahazazana ara-dalàna i Angelina, na dia indray mandeha aza, nilaza izy fa tiany ho zazalahy izy.
Tena nampihetsi-po be i Angelina sady malala-tanana. Izy dia nanana fahazarana manondro ny reniny, Erma, hoe "Reny malala." (1) Mifanohitra amin'ireo zanakavavin'i Erma roa hafa izany, izay tsy nampiasa io andian-teny io.
Tamin'ny june 9, 1960, fony 7 taona i Angelina dia nentin'i Erma izy sy ireo rahavaviny anankiroa teo amoron-dranomasina iray teo amoron'ny renirano, akaikin'ny tranon'izy ireo. Teny an-dalana hody, niampita lalana izy ireo ary nisy fiara iray namely an'i Angelina ary namono azy.
Ny planeta an-dolom-po: Hovelomina indray i Angelina amin'ny maha-zazalahy azy
Taorian'ny nahafatesan'i Angelina tao amin'ny 1960, dia nalahelo mafy i Erma ary nanontany tena izy hoe nahoana no avelan'Andriamanitra hisy ny loza toy izany. Enim-bolana taorian'ny nahafatesan'i Angelina, nisy namana iray nanolo-kevitra ny hahita an'i Erma Rosicrucian Lazao amin'ny fahaiza-manaony, antsoina hoe Francisco Marques Rodrigues.
Nolazain'i Francisco tamin'i Erma fa haverina aminy i Angelina tamin'ny taona 2. Katolika nafana fo i Erma, ka diso hevitra momba ny faminanian'i Francisco, satria tsy anisan'ny finoany ny vatana vaovao.
Mbola nanome toky an'i Erma ihany i Francisco. Nolazainy fa tokony hiomana amin'ny fiverenan'i Angelina izy, na dia mety ho ankizilahy aza izy amin'ny fiverenany manaraka.
Niteraka bevohoka i Erma tamin'ny faran'ny 1961. Tamin'ny volana fahafito nahaterahany, dia nanana nofy i Erma izay nampitain'i Angelina taminy, ary nanondro fa zazalahy izy.
Fahatsiarovana ny zava-nitranga tamin'ny andro taloha niainan'i Angelina i Alfonso
Alfonso dia teraka tamin'ny 23 Aogositra 1962 tao Loures, roa taona mahery kely taorian'ny nahafatesan'i Angelina. Tao anatin'ny volana vitsivitsy taorian'ny nahaterahan'i Alfonso, tamin'ny 1963, dia nifindra tany Lisbon, Portiogaly ny fianakavian'i Lope.
Raha vantany vao afaka niteny izy, dia nilaza i Alfonso fa fanambarana momba ny fanambadiana indray izy io. Nanaiky i Erma, reniny, fa tsy nianatra an'io fanazavana momba ny fiainan'i Angelina tamin'ny fomba mahazatra io i Alfonso. Ireto fanambarana ireto dia ahitana:
1. Tamin'ny 1 ½ taona, dia niantso an'i Erma ho "Reny malala" i Alfonso, izay ilay teny ampiasain'i Angelina ho an'i Erma. Tadidio fa ireo zanakavavin'i Erma dia tsy nampiasa io teny io.
2. Na dia 1½ aza i Alfonso, dia nijery programa fahitalavitra iray izy izay nidina fiara iray nisy ankizy iray nihazakazaka teny an-dalambe. Nibanjina ny masony i Alfonso ary nanomboka niantsoantso izy hoe: "Tsia, Tsia, Tsia," fihetsika maneho ny fahafatesan'i Angelina noho ny namelezan'ny fiara.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha nataon'i Alfonso momba ny soavaly hazo nataon'i Hernani ary ny lamba volondavenona mena an'i Angelina
3. Rehefa lasa 4 taona i Alfonso, dia tonga nitsidika azy ireo tany Lissabon ny fianakaviana Lopes tany Loures. Anisan'ireo mpifanila trano ireo ny ankizilahy iray antsoina hoe Hernani, izay niarahan'i Angelina nilalao. Nanontaniako tampoka, hoy i Alfonso nanontany an'i Hernani:
“Notehirizinao ilay soavaly hazo?” (2) Rehefa velona i Angelina dia nilalao soavaly hazo kilalao Hermani izy sy Hernani.
Nanontany ny reniny avy eo i Hernani raha mbola manana soavaly hazo izy ireo. Namaly ny reniny hoe: "Tsia, nomeko an'i Ana izany." (3)
Avy eo dia hoy i Alfonso: "Eny, ho an'i Anihas sy ny zanany kely." (4)
Nanamarika i Erma fa i Ana dia anaram-bosotra mpanompo niasa ho an'ny fianakavian'i Lope sy ny fianakavian'i Hernani any Loures. Anihas no anaran'i Ana feno, araka ny efa nolazain'i Alfonso. Tena tia an'i Anihas i Angelina. Tamin'ny filazalazana tampoka ny anarana feno an'i Ana, Alfonso dia nanana fahatsiarovana ny fiainana taloha hatramin'ny fahavelony i Angelina.
4. Raha efa ho 6 i Alfonso, talohan'ny nanombohany nankany am-pianarana, dia niditra tao an-dakozian'ny fianakaviany izy izay niarahan'i Erma. Nahita mavo naposina mena i Alfonso. Hoy i Alfonso avy eo:
"Jereo, Mama, ny napkin noraisiko tany an-tsekoly niaraka tamin'ny sakafoko. Haka azy indray aho rehefa miverina any am-pianarana, sa tsy izany? "(5)
Raha ny marina dia hanafaka an'i Angelina i Erma ary hamatotra azy ireo amin'ny lamba voapetaka mena, izay noraisin'i Angelina tany an-tsekoly. Amin'izay, dia nahatsiaro ny zava-nitranga nandritra ny androm-piainan'i Angelina indray i Alfonso.
Reincarnation & Gender Change: Alfonso nilaza tamin'ny mpampianatra azy fa zazavavy izy
5. Volana vitsivitsy taorian'ny nanombohan'i Alfonso ny fianarany, nangataka fihaonana tamin'i Erma ny mpampianatra azy. Nilaza ilay mpampianatra fa tany an-tsekoly, dia nilaza i Alfonso fa ankizivavy ary raha nilaza na nanoratra izy, dia niresaka ny tenany tamin'ny fampiasana teny ho an'ny teny frantsay. Ny mpampianatra dia nanandrana nanitsy ny tenim-pitenenan'i Alfonso tamin'ny teny hebreo, nanondro fa zazalahy izy. Nanaiky i Alfonso avy eo:
"Tsia, zazavavy aho." (6)
Tsaroan'i Alfonso ny endrik'ireo teny ho an'ny vehivavy izay nampiasainy fony izy Angelina, izay nitarika ny fisalasalany momba ny lahy sy ny vavy. Najanony ny fampiasana teny ho an'ny tenin-jaza vavy hatramin'ny faha-fito taonany.
Ny fiainana taloha nataon'i Alfonso dia fahatsiarovana ny fomba hahazoana stockings
6. Indray andro, rehefa nody avy tany an-tsekoly i Alfonso, dia nisotro toaka izy ary nametraka azy tao anaty bainga. Naka fanjaitra izy avy eo ary nilaza fa nanamboatra ny lamosina izy. Raha nanao izany izy, dia hoy i Alfonso:
"Oh, tsy nanao an'izany aho nandritra ny fotoana ela." (7)
Nahatsiaro i Erma tamin'izany fotoana izany fa rehefa nipetraka tao Loures izy ireo, dia ny iray tamin'ireo sakaizan'i Angelina no mpampiasa iray izay nametraka fitaratra iray tao anaty fitoeran'entana ary avy eo dia nanindrona ny bolongana. Ny jiro dia nanamora ny fahitana ny fitazonana ny fanangonana.
Tena tia an'io nenitoa io i Angelina ary nitsidika azy tany amin'ny fivarotana kafe. Tao amin'ny fivarotana, niangavy i Angelina fa hanangona tsikelikely tahaka izany koa izy. Indray, nanamafy i Erma fa tsy nisy niresaka tamin'i Alfonso momba ireo hetsika fananganana fitahirizana izay noraisin'i Angelina.
Noho izany, dia naverin'i Alfonso ny fitondran-tenan'i Angelina.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: nahita ny onin'i Gypsies i Alfonso
7. Rehefa fito taona teo ho eo i Alfonso, dia nanontany matetika ny reniny hitondra azy any amin'ny tetezana vato eo amin'ny renirano. Irma tsy nahalala ny zavatra noresahiny. Tsy nisy tetezana nipetrahan'izy ireo tany Lisbonne ary tsy mahatsiaro ny tetezana rehetra amin'ny tavy.
Fotoana fohy taorian'izay dia nandray an'i Alfonso ho any Loures i Erma mba hitsidika havana iray. Indray mandeha dia niala tao an-trano i Alfonso sy ireo ankizy hafa mba hilalao. Rehefa niverina izy ireo dia nisy mpilalao iray nilaza fa natahotra izy satria nilaza i Alfonso fa hahita ny tetezana izy ary avy eo dia nandeha namakivaky ny arabe izy. Nanaiky izany i Alfonso, nilaza tamin'i Erma hoe:
"Eny, nandeha nijery ny tetezana aho; saingy niova tanteraka, ary tsy misy gypsies any. "(8)
Nanontany an'i Alfonso avy eo i Erma raha io ilay tetezana izay noresahiny taloha, fa te hitsidika azy. Namaly izy hoe:
"Eny, Mama. Tsaroanao ve ireo gypsies taloha? Te hanampy azy ireo hanasa ny akanjon'izy ireo aho. "Nanohy ny teniny i Alfonso hoe:" Misy tetezana lehibe ety an-tany, tsy mitovy amin'ny taloha. "(9)
Nahatsiaro i Erma tamin'izany fa rehefa nipetraka tao Loures ny fianakaviana, dia tsy nisy fiangonana katolika romana teo amin'ny manodidina azy. Mba hanatrehana betsaka ny Alahady dia tsy maintsy nandeha tany amin'ny fiangonana iray tany amin'ny fiaraha-monina iray hafa ny fianakaviana. Tsy maintsy nandeha niampita renirano izy ireo, ary nampiasa tranobongo vato. Erma, Angelina ary ny fianakaviana dia niampita ity tetezana vato ity mba handeha any am-piangonana.
Tsy nahita an'io tetezana rock io mihitsy i Alfonso nandritra ny androm-piainany tamin'ny vanim-potoana ankehitriny, toy ny tamin'ny fotoana nahaterahany, ny tetezana vaovao dia naorina ary nanolo ny tetezana vato. Noho izany, i Alfonso dia nahatsiaro ny sehatra tamin'ny fiainan'i Angelina.
8. Alfonso dia namaritra mazava tsara momba ny fahafatesan'ny alika fotsy kely iray sy ny toerana mainty izay niainan'ny fianakavian'i Lopes fony mbola velona i Angelina.
Erma nanamafy fa ny fianakaviana dia nanana alika fotsy kely misy spots mainty, araka ny namaritan'i Alphonse. Ity maty ity dia maty 2 volana talohan'ny nahafatesan'i Angelina. Erma nanome toky fa tsy nisy niresaka tamin'i Alfonso momba an'io alika io. Amin'izany, ny fahatsiarovana ny alika dia maneho sary iray avy amin'ny fiainan'i Alfonso taloha fony i Angelina.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha an'i Alfonso: Miavaka toy ny tamin'ny androm-piainana ankehitriny
Tao amin'ny 1997, fony 35 taona i Alfonso, dia nilaza tamin'i Ian Stevenson izy fa ny fahatsiarovany ny soavaly vita amin'ny kilalao, ny renirano amin'ny tetezana vatolampy miaraka amin'ny vehivavy manasa fitafiana ao amin'ny renirano, ary ny fahafatesan'ny alika fotsy tamin'ny faritra fotsy dia tena nazava be fa toa ireny fahatsiarovana ireny dia avy amin'ny fahazazany, fa tsy tamin'ny andro taloha.
Tsy teraka i Alfonso rehefa niseho ny zava-nitranga. Noho izany, ireo fahatsiarovan-tena mazava ireo dia avy amin'ny fiainan'i Alfonso taloha fony i Angelina.
Izany dia mampahatsiahy ny tranga vao teraka indray Carroll Beckwith | Robert Snow, izay nilazan'i Snow fa ny fahatsiarovana ny fiainany taloha dia tena marina kokoa noho ny fahatsiarovan-tena.
Phobia an'ny fiara amin'ny fiainana taloha
Alfonso dia namorona phobia fiara, taratry ny androm-piainan'i Angelina izay nandona fiara iray ka nitarika ny fahafatesany. Noho ny antony sasany dia tsy niseho ny phobia an'i Alfonso raha tsy 16 taona i Alfonso.
ao amin'ny Rashid Khaddege | Daniel Jurdi tranga teraka tao amin'ny vatana vaovao indray, Daniel koa dia nanana phobia an'ny fiara mandeha haingana vokatry ny fahafatesan'i Rashid tamin'ny lozam-pifamoivoizana.
Fianakaviana fanambadiana mitovy: Angelina Lopes indray no nampiova azy ho fianakaviany.
Fiovana eo amin'ny lahy sy vavy: Raha mbola zaza i Angelina dia nilaza tamin-dreniny fa iriny ho ankizilahy izy. Ny fikarohana momba ny Reynarnarna dia manondro fa ny fiovan'ny lahy sy ny vavy amin'ny 5-10 isan-jaton'ny tranga ihany. Hita fa ny lahy dia manana lahy sy vavy manokana ary amin'ity tranga ity dia toa manandrana ny fahazoana ny lahy ny fisainan'ny Angelina. Raha vao teraka indray izy, dia efa lasa zazalahy iray tao an-tsain'i Alfonso.
Phobia avy amin'ny fiainana taloha: Maty i Angelina rehefa nisy namono ary namono azy. Nanamboatra karazana fiara i Alfonso.
Planin'ny fanahy & fitarihana fanahy: Rehefa nisedra ny fahafatesan'i Angelina i Erma, dia nitsidika mozika Rosicrucian antsoina hoe psychic antsoina hoe Francisco Marques Rodrigues izy. Nolazain'i Francisco fa haverina ho zanany indray i Angelina. Ankoatra izany, dia nilaza taminy izy fa mety hiteraka zazalahy i Angelina. Tonga tanteraka ny faminaniany. Tahaka ny hoe avy any amin'ny tontolon'ny fanahy i Angelina dia niresaka tamin'i Francisco, izay nanondro ny drafitr'izy ireo momba ny hoavy.
Reincarnation & Fiovana amin'ny fivavahana: Katolika nafana fo i Erma. Nino izy fa i Angelina zanany vavy efa maty, dia lasa indray nipoitra indray tamin'i Alfonso zanany. Noho izany, niova avy tamin'ny finoany Katolika i Erma, izay tsy ahafahan'ny vovoka indray ny vatana vaovao ao amin'ny vatana vaovao, mba hinoan'ny vatana vaovao indray.
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 108
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 111
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 111
4. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 111
5. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 111
6. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 111
7. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 112
8. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 112
9. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 112